Barcelona oo guul dirqi ah ka soo gaartay kooxda Leganes oo ay booqatay…+SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo guul dirqi ah ka soo gaartay kooxda Leganes oo ay booqatay…+SAWIRRO
Dajiye November 23, 2019
(Leganés) 23 Nof 2019. Barcelona ayaa si dirqi ah saddexda dhibcood kaga soo qaadatay kooxda Leganes oo ay ku booqatay Estadio Municipal de Butarque, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Leganes.
Daqiiqadii 12-aad kooxda Leganes ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay Youssef En-Nesyri, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Roque Mesa.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican, iyagoo sameeyay fursado halis ah ee goolal loo filan karay.
Daqiiqqadii 53-aad kooxda Barcelona ayaa la timid goolka barbaraha waxaana dheesha 1-1 ka dhigay Luis Suarez, iyadoo uu goolkan ka caawiyay Lionel Messi.
Daqiiqadii 79-aad kooxda Barcelona ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay waxaana 1-2 ka dhigay xiddiga reer Chile ee Arturo Vidal
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 1-2 ay guusha ku raacday kooxda martida aheyd ee Barcelona.
Xasaasi, Siciid Yamani iyo Macallin Cabdi Joon oo abaal-marinno ka helay tartankii dhowaan la soo xiray ee General Daa’uud... + SAWIRRO